Izinkampani zefenisha Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Izinkampani zefenisha in North Hollywood
Izinkampani zefenisha in California
Ishicilelwe ngu Modern Bathroom
ukubuka Izinkampani zefenisha eshicilelwe 2 weeks ago
Ishicilelwe ngu SK Designer Living
ukubuka Izinkampani zefenisha eshicilelwe 8 months ago
ukubuka Izinkampani zefenisha eshicilelwe 3 years ago
Ifenisha isho izinto eziguqukayo ezihlose ukusekela imisebenzi eyahlukahlukene yabantu njengokuhlala (isib, izihlalo, izihlalo, kanye nesofa), ukudla (amatafula) nokulala (isib, imibhede). Ifenisha isetshenziselwa futhi ukubamba izinto endaweni efanelekile yomsebenzi (njengezindawo ezivundlile ngaphezulu komhlaba, njengamatafula namadesiki), noma ukugcina izinto (isib. Izinkomishi namashalofu). Ifenisha ingaba umkhiqizo wokuklama futhi ibhekwa njengendlela yobuciko bokuhlobisa. Ngaphezu kwendima yokusebenza kwefenisha, ingasebenza injongo engokomfanekiso noma yenkolo. Kungenziwa ngezinto eziningi, kufaka phakathi insimbi, ipulasitiki nezinkuni. Ifenisha ingenziwa kusetshenziswa izinhlobo ezahlukene zokuhlanganisa izinkuni ezibonisa isiko lendawo.